လူပျိုစစ်မစစ်ကို ဒီအချက်တွေကနေ သိရှိသွားနိုင် - Padaethar
အမျိုးသားအားလုံးလိုလိုဟာ လူပျိုဘဝကို အစောကြီး ဆုံးရှုံးတတ်ကြတယ်လို့ အများစုက ယူဆကြသည့်တိုင် အသက် ၂၅၊ ၃၀ ထိတောင် ဖိုမကိစ္စမစမ်းသပ်ဖူးတဲ့ အမျိုးသားတချို့ရှိနေတယ် ဆိုတာပါပဲ။
သူတို့လည်း သူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ကောင်လေးဟာ လူပျိုစစ်မစစ် သိချင်တယ်ဆိုရင် ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်မယ့် လက္ခဏာရပ်တချို့ရှိပါတယ်။ တခါတရံ ခန့်မှန်းချက်တွေ လွဲကောင်းလွဲပါလိမ့်မယ်။
လူပျိုစစ်မစစ် သူသာအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိချင်စိတ်ပြင်းပြနေသေးတယ်ဆိုရင် လူပျိုစစ်စစ်တွေ ပြုမူတတ်တဲ့ ကိုယ်အမူအရာတချို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူပျိုစစ်စစ်ဖြစ်တယ်၊
မဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ သူ့အချစ်ရေးအဆင်ပြေမှုရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာကတော့ လုံးလုံးမသက်ဆိုင်ကြောင်း သိထားသင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ လူကောင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သူ့အတွေ့အကြုံရှိမှု သို့မဟုတ် မရှိမှုပေါ် မူတည်ပြီးတော့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။
မိမိတို့အချစ်ရေးဆက်ဆံမှုရဲ့ အနှစ်သာရကို အဓိကထားကြည့်ပါ….
၁။ သင်နဲ့ တခြားမိန်းကလေးတွေနားရောက်လို့ သူအရမ်း ရှက်နေတယ်၊ မတော်တဆ အနည်းငယ် ထိမိတာတောင် ရှောင်ဖယ်နေရင် သူဟာ မိန်းကလေးတွေနဲ့ နေသားမကျသေးတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ မိန်းကလေးတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ခပ်လှမ်းလှမ်းနေတတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ သူ့ကို အနည်းငယ် စနောက်ရင်တောင် မျက်နှာနီရဲလာပါတယ်။
၃။ အပြင်မှာတွေ့ဖို့ တောင်းဆိုအခါမျိုးမှာ နှလုံးရောဂါဖြစ်မတတ် ခံစားတတ်ပါတယ်။ သူ့ကို တို့ထိကြည့်ပါ။ လေဖြတ်သလို တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
၄။ ပူးပူးကပ်ကပ်နေဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ သူ့အသံတစ်မျိုးပြောင်းပြီး ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့ပြောဆိုပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းရှက်တတ်တဲ့ လူပျိုစစ်တဲ့ အမျိုးသားတချို့ဆိုရင် မိန်းကလေးနဲ့ပထမဆုံးထိတွေ့တဲ့အခါ မျက်ရည်တောင် ဝဲနေ တတ်ကြပါတယ်။
၅။ အိပ်ရာထဲရောက်တဲ့အခါ တစ်သက်မှာ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး စိတ်အားထက်သန်စွာ လိုက်ကြည့်နေပါလိမ့်မယ်။
၆။ ယောက်ျားလေးအချို့မှာ (…..)တံထိပ်ငုံအရေပြား ခပ်တင်းတင်းရှိကြပါတယ်။ အဲဒီလိုယောက်ျားတွေဟာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ချစ်တင်းနှောတဲ့အခါ သွေးတွေယိုတတ်ပါတယ်။ Achitlwinpyin Ref: Boldsky
လူပြိုစဈမစဈကို ဒီအခကျြတှကေနေ သိရှိသှားနိုငျ
အမြိုးသားအားလုံးလိုလိုဟာ လူပြိုဘဝကို အစောကွီး ဆုံးရှုံးတတျကွတယျလို့ အမြားစုက ယူဆကွသညျ့တိုငျ အသကျ ၂၅၊ ၃၀ ထိတောငျ ဖိုမကိစ်စမစမျးသပျဖူးတဲ့ အမြိုးသားတခြို့ရှိနတေယျ ဆိုတာပါပဲ။
သူတို့လညျး သူ့အကွောငျးပွခကျြနဲ့သူ ရှိပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ကိုယျဒိတျလုပျတဲ့ ကောငျလေးဟာ လူပြိုစဈမစဈ သိခငျြတယျဆိုရငျ ခနျ့မှနျးသိရှိနိုငျမယျ့ လက်ခဏာရပျတခြို့ရှိပါတယျ။ တခါတရံ ခနျ့မှနျးခကျြတှေ လှဲကောငျးလှဲပါလိမျ့မယျ။
လူပြိုစဈမစဈ သူသာအသိဆုံးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သိခငျြစိတျပွငျးပွနသေေးတယျဆိုရငျ လူပြိုစဈစဈတှေ ပွုမူတတျတဲ့ ကိုယျအမူအရာတခြို့ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လူပြိုစဈစဈဖွဈတယျ၊
မဖွဈဘူးဆိုတာနဲ့ သူ့အခဈြရေးအဆငျပွမှေုရှိတယျ မရှိဘူးဆိုတာကတော့ လုံးလုံးမသကျဆိုငျကွောငျး သိထားသငျ့ပါတယျ။ ဒီတော့ လူကောငျးဟုတျမဟုတျဆိုတာ သူ့အတှအေ့ကွုံရှိမှု သို့မဟုတျ မရှိမှုပျေါ မူတညျပွီးတော့ မဆုံးဖွတျပါနဲ့။
မိမိတို့အခဈြရေးဆကျဆံမှုရဲ့ အနှဈသာရကို အဓိကထားကွညျ့ပါ….
၁။ သငျနဲ့ တခွားမိနျးကလေးတှနေားရောကျလို့ သူအရမျး ရှကျနတေယျ၊ မတျောတဆ အနညျးငယျ ထိမိတာတောငျ ရှောငျဖယျနရေငျ သူဟာ မိနျးကလေးတှနေဲ့ နသေားမကသြေးတဲ့ အဓိပ်ပါယျဖွဈပါတယျ။
၂။ မိနျးကလေးတှနေဲ့ စကားပွောတဲ့အခါ ခပျလှမျးလှမျးနတေတျပါတယျ။ မိနျးကလေးတှေ သူ့ကို အနညျးငယျ စနောကျရငျတောငျ မကျြနှာနီရဲလာပါတယျ။
၃။ အပွငျမှာတှဖေို့ တောငျးဆိုအခါမြိုးမှာ နှလုံးရောဂါဖွဈမတတျ ခံစားတတျပါတယျ။ သူ့ကို တို့ထိကွညျ့ပါ။ လဖွေတျသလို တုနျတုနျယငျယငျဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
၄။ ပူးပူးကပျကပျနဖေို့ ကွိုးစားတဲ့အခါ သူ့အသံတဈမြိုးပွောငျးပွီး ထဈထဈငေါ့ငေါ့ပွောဆိုပါလိမျ့မယျ။ အရမျးရှကျတတျတဲ့ လူပြိုစဈတဲ့ အမြိုးသားတခြို့ဆိုရငျ မိနျးကလေးနဲ့ပထမဆုံးထိတှတေဲ့အခါ မကျြရညျတောငျ ဝဲနေ တတျကွပါတယျ။
၅။ အိပျရာထဲရောကျတဲ့အခါ တဈသကျမှာ ကိုယျလုံးတီးနဲ့ ဘယျသူ့ကိုမှ မမွငျဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့ တဈကိုယျလုံး စိတျအားထကျသနျစှာ လိုကျကွညျ့နပေါလိမျ့မယျ။
၆။ ယောကျြားလေးအခြို့မှာ (…..)တံထိပျငုံအရပွေား ခပျတငျးတငျးရှိကွပါတယျ။ အဲဒီလိုယောကျြားတှဟော ပထမဦးဆုံးအကွိမျ ခဈြတငျးနှောတဲ့အခါ သှေးတှယေိုတတျပါတယျ။ Achitlwinpyin Ref: Boldsky